Xiliga Rasmig ah ee ay bilaaban doonaan Cayaaraha Maamul Goboleedyada oo lashaaciyey? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xiliga Rasmig ah ee ay bilaaban doonaan Cayaaraha Maamul Goboleedyada oo lashaaciyey?
(19-11-2017) War goordhow kasoo baxay Wasaarada Dhalinyada iyo isboortiga ee Dowlada Soomaaliya ayaa si cad loogu sheegay waqti rasmiyan ee la qaban doono tartanka Maamul goboleedyada dalka.
Wasiirka Wasaarada Dhalinyada iyo isboortiga ee Dowlada Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye oo booqosho ku joogta Magaalada Kismaayo ayaa aqalka Martida ee Jubaland kulan kula qaadatay Wasiirada isboortiga ee Maamul goboleedyada dalka iyo Madaxda Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubada Cagta, kaas oo shalay ilaa maanta gelinkii hore ka socday magaalada Kismaayo.
Wafdiga Wasiirka Wasaarada Dhalinyada iyo isboortiga ee Dowlada Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay garoonka Waamo Stadium, kaas oo la ogson yahay in uu wali ka socdo dayactir, si bilowga bisha danbe loogu qabto Ciyaaraha maamulka goboleedyada dalka oo 7-ka bisha danbe ee December ka dhici doona halkaas.
Shir goor dhow soo gabagaboobmar ayaa looga soo saaray qodobo dhowr ah.
1-aad 29-ka bishan ilaa horaanta December ay noqoto keenista iyo dejinta Ciyaartoyda Dowlad Goboleedyada iyo gudiyadooda.
2- In Kooxaha ay tababar ku qaataan garoonka Kubada Cagta ee Waamo Stadium 2-ilaa iyo 5-ta December.
3- in sedexda bisha December loo samayn doono qori tuur ama isku aadka Kooxaha Dowlad goboleedyada dalka.
4- In 6-bisha December dhamaan Kooxaha waxaa la sheegay in ay geli doonaa maalin nasasho ah.
5- Waxaa si rasmi ah lo sheegay in Toddobada bisha December uu si rasmi ah u furmi doono tartanka maamul goboleedyada dalka oo ay ka qayb galayaan dhamaan maamulada hoostaga Dowlada Federaalka Soomaaliya oo kala ah Jubaland, Buntland, Galmudug, Koofur Galbeed, Hiirshabeele iyo Ciyaartoyda Gobolka Banaadir.
Si kastaba ha ahaatee’ sanad Ciyaareedkii tagay ee 2016-kii Ciyaaraha Maamul goboleedyada dalka oo lagu qabtay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa ku guulaystay Ciyaartoydii Maamul Goboleeda Buntland markaas oo ay ka qaadeen dhigooda Jubaland.
W/D Maxamed Cabdulaahi Digirey